Marble manicure gel sula uyawuthanda ukuthandwa engakaze ibonwe. Kuyinto efanelekayo nsuku zonke, ngezikhathi ezikhethekile, ukuhamba olwandle. izinzipho omuhle njengenyanga amatshe Okuyınqo, kungenziwa kakhulu ukumane, kodwa kusukela eyinhloko kwadinga ukubekezela, isineke ukunemba. Namuhla uzokutshela indlela yokwenza gel zemabula manicure sula, intando ngokuningiliziwe ngezindlela ezimbili ethandwa kakhulu.
Imibala incongruous kakhulu
Ngaphandle, le manicure kumele ibukeke zemabula real - shades eziningana isicelo amabala, ngomusa esikhundleni nomunye. Palette kungaba zakudala noma ezimibalabala, into esemqoka - ukukhetha imibala efanele ngakho ufane. Ingoma ethandwa kakhulu:
sifana inhlanganisela blue and white, gray nomhlophe, akuyona version esingaphansi ethandwa we pink nomhlophe;
uhlanganise shades eziningana green, engeza iconsi inki, ungathola "wangempela" Emerald;
esebenzisa shades eziningana okwesibhakabhaka, ne ukwengeza abamnyama kutholakala mbumbulu oluluhlaza;
Sebenzisa igolide imigqa, futhi yakho zemabula intando mica ungqimba.
Ezinye kukhombe manicure aqueous enjalo, ngenxa yokuthi eyodwa yezindlela kudinga amanzi. Kodwa ezinye amakhosi ukuzijayeza kanye nezinye izindlela ngisho uplastiki ukugoqa noma zepulasitiki.
Kungani sidinga amanzi?
Amanzi - indawo ephelele mix imibala. It izinzipho wasibekela kahle varnishes, shades isicelo kalula futhi ngokulinganayo, bome kahle. Siphakamisa ukuba sicabangele ubuchwepheshe ukusebenza gel zemabula manicure sula ngamanzi.
tank amanzi (kungcono ukusebenzisa plastic, izinkomishi alahlwayo ukuthi musa khumbulani lokudlela phakathi naleyo nqubo, bese aphonse);
okungenani ezimbili umbala gel sula;
inaliti noma lokuvungula ukwakha sehlukaniso;
isizinda, phezulu kanye primer;
amanzi (ungasebenzisi buyabanda noma efudumele, ekahle - Igumbi lokushisa);
isibane iphele nail sula.
Ngaphambi kokufaka isicelo umbala kufanele kube izinzipho ulungiselelwe kahle. Ngenxa yalesi cuticle isuswe, ipuleti gaya (hhayi isidingo kakhulu ukususa elingenhla isicwebezelisi isendlalelo ukuze ukuvenisha kungcono agcinwe) ukudala umumo edingekayo. Okulandelayo:
Nails kufanele degreased okuyiwa ukususwa ukuvenisha noma ithuluzi ekhethekile. Emva kwalokho, isicelo primer emva omiswe - isizinda.
Ukuvuza e ijeli amanzi ukuvenisha kancane ubeke amaphuzu amaningana lowehlukile, inaliti noma lokuvungula ukudala amabala, okwenza emapheshana, zigzags, lemiklamo, nezinye izakhi.
Nail kumele igcinwe parallel ifilimu lacquer, ngomusa futhi ngokushelela, alibeke kahle plate ungene ifilimu nalutho ohlangothini asikiweko ngcono lacquer imiphetho, ngokulinganayo ayihambise kwi plate nail.
Lokhu kuhlinza kwaba ukwenza ezinye izipikili.
On ukotini pad kusho isicelo nail remover sula ukususa kusukela usula isikhumba.
Uma kudingeka, ibhulashi dorisovyvat izakhi.
Nge isibani womile lacquer.
Faka isicelo izinzipho base ukuze ome ngaphansi kwesibani, ukususa ezingemnandi ungqimba okunamathelayo.
Okungamelwe ukwenze ukuze zemabula manicure Kwatholakala?
amakhosi amaningi imfundamakhwela benza amaphutha, futhi iklayenti uyaneliseka yi. Kwenzeka ukuthi manicure futhi musa ukuphatha ukwenza. Yini kubalulekile ukukhumbula?
Sebenzisa amanzi kuphela emazingeni okushisa okuvamile, ngaphandle kwalokho ngeke bakwazi ukwenza inqubo.
lacquers Manicure ongakhetha kuzo nomkhiqizi eyodwa kuphela, ukuhluka ikani "akuyona ukwenza abangane."
Ungayisebenzisi aphelelwe yisikhathi uqweqwe bese gel-lacquers.
Uma ungafuni ukusebenzisa le ndlela, ungakwazi umane ukuthenga ngomumo eyenziwe gel lacquers ukuthi ukunikeza umphumela zemabula. Lawa ekahle Wabasaqalayo futhi amakhosi sokuba namantombazane njalo, udala manicure kuphela ekhaya, kuphela. ukuvenisha okunjalo nigqoke nje ngezipikili ukuze ome ngaphansi kwesibani.
Marble izinzipho ngaphandle kwamanzi
Ungenza ngaphandle ketshezi, cabanga inqubo yokusebenza lapho usebenzisa le ndlela.
Isinyathelo sokuqala siwukuba alungiselele 'ngendwangu "- ifayela off ngezipikili, susa cuticles nasePoland plate. Emva kwalokho, isicelo primer ngoba isikhashana, bese kumila, ome kahle.
Kancane lacquer esikhunjeni ome kahle ngaphansi kwesibani. Khona-ke isicelo ukuvenisha esobala, akadingi ukuba omisiwe.
On the ucwecwe iconsa kancane sula, okuzokwenza mnyama isizinda. Esitsheni esincane, uthele klinser bakwazi ukuhlanza ibhulashi ngokushesha. Ngosizo shayela mncane kakhulu ukusebenzisa ku izipikili ukudweba, elifana nalelo itshe yenkumbulo. Kuyinto ezihlukahlukene imigqa, ikhangele phezulu enezingqimba, iqonde, banana, lamafisha. Charm gel ukuvenisha ezingeke yokusheshisa iphethini substrate, okokusebenza ezomile.
ezomile Ready umdwebo lisebenzise isikhathi esidingekile ngaphansi kwesibani.
Sebenzisa phezulu, emoyeni elomile futhi, susa phezulu ingcina ungqimba.
Izithombe zemabula gel manicure sula ayatholakala kule athikili. Eqinisweni, amaphethini ongakhetha kakhulu, ungesabi ulinge, baziqambela izinto ezintsha.
Marble manicure gel ukuvenisha nge iphakethe
Wena ekhaya, ungakha ngokulinganayo ezikhangayo "itshe" marigolds ukudlula lezo ezinikelwa yidolobha endlwaneni eyakhiwe. Indlela yokwenza zemabula manicure gel lacquer kanye uplastiki? Sekuyinto elula, uyobheka hhayi kuphela isikhathi eside, kodwa futhi ku marigolds iDemo.
Lungiselela izinzipho, sibanikeze, okubangela primer bese kumila.
Cover umbala ipuleti ingemuva, ezomile.
Nail iconsa amaconsi ambalwa isifutho ezahlukene, izingxenye ezincane kuphela, uma kungenjalo kungaba izmaratsya kakhulu, futhi iphethini ngeke vela.
Namathisela ucezu iphakethe esikhonkwaneni, kancane kwabanika isizathu phezu, uma indlela yokulibiza evumelana - ihlumela.
Sisule izinzipho, uzinameke phezulu, asuse stickiness.
Hlanza esikhumbeni azungeze nail nge swab ukotini.
Isikhwama kungaba crumple ingafi ngokudala umdvwebo, njengetshe, kuyoba lula. Futhi, ezinye zisebenzisa izindlela ezifanayo ukuze amanzi. I ukuvenisha sisetshenziswa ngqo esikhwameni, Umdwebo wadala kuso ngosizo uthi lokuvungula. Ngemva kwalokho nail sisetshenziswa kahle ngaphansi kwamanzi, kuba isithombe, itshe-like enamathela kwalo.
Marble manicure gel lacquer ulungile! Ukuze amehlo, ungasebenzisi imibala ezingaphezu kuka ezine ngesikhathi esisodwa.
Nail Design "Cat sika Eye" ijeli sula (izithombe)
Kuyini ukukhipha kanye nezici zayo